Ukunqaka okumangazayo kwa-Kohli no-Miller kugqamisa umdlalo we-T20
u-Virat Kohli no-David Miller banqake ibhola ngesandla esisodwa okade kuncomeka kumdlalo wesibili we-T20 international phakathi kwama-Standard Bank Proteas ne-India e-Mohali ngoLwesithathu.
i-India inqobe umdlalo ngezinti eziyisikhombisa kusele i-over eyodwa ukubangaphambili ngo-1-0 kwi-series kusele umdlalo wokugcina kwi-series ozodlalelwa e-Bangaluru ngeSonto emuva kokuthi umdlalo wokuqala e-Dharamsala ngeSonto elidlule umiswe imvula.
Kube ukuqaka kwa-Kohli okuguqule izinto kumdlalo kuphuma ukapteni u-Quinton de Kock (52 off 37 balls) ngesikhathi yena nodlala umdlalo wakhe wokuqala u-Temba Bavuma (49 off 43 balls) bebekela ama-Proteas umphumela onenselelo emuva kokushayiswa kuqala.
Kodwa ukuphuma kusho ukuthi i-India, isebenzisa amakhono okushwiba ekugcineni ikakhulukazi ukushintsha kwabashwiba nge-pace, ukubeka ama-Proteas ku-61 emabholeni awu-54 emuva kokuphuma kwa-De Kock.
u-Andile Phehlukwayo no-Dwaine Pretorius bashaye u-six umuntu emunye kwi-over yokugcina kodwa umphumela obubheke i-India u-150 ubushoda ngama-runs awu-30 kulokhu okade kudingwa ama-Proteas.
Kuze kube yilapha kuphuma khona u-De Kock umdlalo kade ulingene womabili amaqembu efana ku-105/3 kusele ama-overs ayisithupha.
Kodwa, kuhola u-Kohli (46 not out off 38 balls, 2 fours, 1 six), i-India inqobe kahle.
Ukunqaka kwa-Miller kwinkundla yakhe eyodwa adlala kuyona kwi-Indian Premier League ibe yinhle njengokunqaka kwi-boundary futhi kugqugquzele abavimbile be-South Africa, okuvumele amathuba ambalwa ama-run out angashayanga, kade ekwizinga elihle obekufana nama-Proteas eminyakeni ewu-30 edlule. Kube ukuqaka kwesi-50 kuka-Miller kuma-T20 international.
Ama-Proteas adlalise abadlali abathathu abasha wenza kahle u-Bavuma. Ikhono lakhe lokugijima kahle phakathi kwezinti kanye nokuphendula o-one babe o-two ithalente elihle kwathi i-left-arm spinner, u-Bjorn Fortuin, naye angawujabulela umsebenzi wakhe.
Kufanile nakulaba abashwiba ngokushesha kumdlalo u-Anrich Nortje ophisane ngama-runs kodwa ukhombise ukuthi angagijima afike ku-150km/h futhi isipiliyoni sizomusebenzela kahle.
Umdlalo wokuqala wama-Proteas we-T20 international umiswe imvula i-CSA ibeka u-Amol Muzumdar njengomqeqeshi wokushaya obambile kwiqembu lama-Test kuma-Proteas i-CSA imemezela abasebenzi abazoseka kuhambo lwama-Proteas lase-India i-CSA ibala u-Nortje, u-Muthusamy no-Second njengabadlali abasha kuma-Test u-Rassie van der Dussen unikwe inkontileka yesizwe u-Enoch Nkwe uyena obambile kuma-Proteas njenge-Team Director u-Faf ujabulela umbono we-ICC World Test Championship Imvula imosha umdlalo we-World Cup wama-Proteas nama-Windies Awakanqobi ama-Proteas emuva kokuhlulwa i-Bangladesh u-Steyn uzophuthelwa umdlalo wokuqala we-ICC Men’s Cricket World Cup i-CSA imemezela uhlelo lemidlalo yama-internationals ekhaya ngo-2019/20